ग्लोबल आइएमईले कात्तिक २३ मा बोलायो साधारणसभा, के–के छन् अजेण्डा ?
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमीटेडले आगामी कात्तिक २३ गते बिहीबार आफ्नो एघारौं वार्षिक साधारणसभा(एजीएम) आह्वान गरेको छ । असोज २० गते बसेको २८१ औं बोर्ड बैठकले काठमाण्डौको बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा साधारणसभा बोलाएको हो । साधारणसभामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को खूद नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको विशेष प्रस्ताव पेश...
सानिमा बैंकको एजीएम असोज २९ गते, के-के छन् एजेण्डा ?
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमीटेडले आगामी असोज २९ गते १३ औं वार्षिक साधारणसभा(एजीएम) आह्वान गरेको छ । यो बैंकको असोज ४ गते बसेको संचालक समितिको ३३८ औं बैठकको निर्णयअनुसार काठमाण्डौको नक्सालस्थित नक्साल ब्याङ्वेटमा आफ्नो १३ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को खूद नाफाबाट संचालक समितिले प्रस्ताव...
इतिहास बन्यो एनबी इन्स्योरेन्स, आइएमई इन्स्योरेन्सको रुपमा ५ वर्षभित्र टप कम्पनी बन्ने उद्घोष
काठमाण्डौ । लामो समयदेखि एनबी इन्स्योरेन्सको नाममा कारोबार गरिरहेको कम्पनीको नाम परिवर्तन भएको छ । यो कम्पनीको मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न २० औं वार्षिक साधारणसभाले एनबी इन्स्योरेन्स नामलाई हटाएर आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमीटेड राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । इन्स्योरेन्सको संचालक समिति अध्यक्ष आइएमई समूहका प्रबन्ध निर्देशक...
स्वरोजगारको एजीएम कात्तिक ११ गते, बुक क्लोज असोज २३ देखि
काठमाण्डौ । स्वरोजगार लघुवित्तले वार्षिक साधारणसभा(एजीएम) प्रयोजनका लागि आगामी असोज २३ देखि कात्तिक ११ गतेसम्म बुक क्लोज हुने घोषणा गरेको छ । यो लघुवित्त संस्थाको वार्षिक साधारणसभा आगामी कात्तिक ११ गते आयोजना हुँदैछ । साधारणसभाले यसअघि कम्पनीको बोर्ड बैठकबाट प्रस्ताव भएको २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३२ प्रतिशत नगद...
सानिमा बैंकको एजीएम कहिले ?
काठमाण्डौ । सानिमा बैंकले आगामी असोज २९ गते वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । यो बैंकको असोज ८ गते सम्पन्न बोर्ड बैठकले कम्पनीको १३ औं वार्षिक साधारणसभा २९ गते आह्वान गरेको हो । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गर्नेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी तथा खर्च विवरण, सम्पूर्ण...
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको बम्पर : २०% नगद र २०% सेयर लाभांश पारित
काठमाण्डौ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले आफ्ना लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत सेयर लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न संस्थाको छैठौ वार्षिक साधारणसभाले कुल ४० प्रतिशत लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । सो वार्षिक साधारणसभाले वाणिज्य बैंक समूहबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न उमंग शर्मा...
नबीलका सेयरधनीले पाउने भए दशैंखर्च, साधारणसभा १० गते
काठमाण्डौ । नबील बैंकका सेयरधनीले दशैं खर्चको रुपमा नगद लाभांश पाउने भएका छन् । यो बैंकले आगामी असोज १० गते वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट प्रस्ताव गरिएको १८ प्रतिशत नगद लाभांश र ३० प्रतिशत बोनस सेयरको प्रस्ताव पारित हुनेछ । संचालक समितिको ४८ प्रतिशत लाभांश वितरणको निर्णय राष्टबैंकबाट...
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एजीएम कात्तिक ७ मा, बुक क्लोज असोज १८ गते
काठमाण्डौ । लगानीकर्तालाई गलत सूचना दिएर गलत काम गरेको बिषयमा धितोपत्र बोर्डको कारबाही छल्न सफल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आगामी कात्तिक ७ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । यो बैंकले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै काठमाण्डौको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्टिय सभा गृहमा कात्तिक ७ गते बिहान १० बजे ३१ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो...
दशैंअघि एनआइसीका सेयरधनीको मुहार उज्यालो !
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट लाभांश घोषणा तथा साधारणसभामा सबैभन्दा अगाडि भएको एनआइसी एशिया बैंकले दशैंअघि आफ्ना सेयरधनीको मुहार उज्यालो बनाइदिएको छ । बैंकको शुक्रबार सम्पन्न २० औं वार्षिक साधारणसभाले २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । काठमाण्डौको बबरमहलस्थित कार्की ब्यांग्कवेटमा सम्पन्न...
युनिलिभरले कहिलेलाई तोक्यो बुक क्लोज ?
काठमाण्डौ । युनिलिभर नेपाल लिमीटेडले साधारणसभा प्रयोजनका लागि बुक क्लोजको मिति सार्वजनिक गरेको छ । नेप्सेमा सूचिकृतमध्ये सबैभन्दा महंगो सेयर मूल्य रहेको यो कम्पनीले भदौ ३० देखि असोज २० गतेसम्मको अवधिलाई बुक क्लोजको मिति तोकेको हो । यो कम्पनीको पछिल्लो प्रतिकित्ता मूल्य ३० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो कम्पनीले असोज २० गते आफ्नो...
सानिमा बैंकको बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमीटेडले साधारणसभा प्रयोजनका लागि बुक क्लोजको मिति तोकेको छ । यो बैंकले असोज ६ गतेलाई बुक क्लोजको मिति तोकेको हो । यो बैंकले वार्र्षिक साधारणसभाको मिति भने तोकिसकेको छैन, तथापि असोज भित्रै हुने गरी बुक क्लोजको मिति निकालिएको प्रमुख सूचना अधिकृत तेजबहादुर चन्दले जानकारी दिए । यसको अर्थ असोज ५ गतेसम्म यो...
मेरो माइक्रो फाइनान्सको एजीएम असोज ३० मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । मेरो माइक्रो फाइनान्स बित्तीय संस्थाले आगामी असोज ३० गते आफ्नो पाँचौ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्दै सो प्रयोजनका लागि बुक क्लोजको मिति समेत तोकेको छ । यो माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले नुवाकोटको विदूर ३ स्थित होटल वाटर टावरमा असोज ३० गतेका लागि वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । वार्षिक साधारणसभामा गत आर्थिक वर्षको खुद...
दशैंअघि कस–कसको साधारणसभा ? कसले कति लाभांश दिंदै ?
काठमाण्डौ । मंगलबार एक वाणिज्य बैंक र दुुई बिमा कम्पनीले दशैंअगाडि नै साधारणसभा आह्वान गरेका छन् । यी तीन कम्पनीसहित दशैंअगाडि साधारणसभा आह्वान गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या १० पुुगेको छ । मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै साधारणसभा आह्वान गर्नेहरुमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनबी इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्स रहेका छन्...
नेपाल इन्स्योरेन्सको दुई एजीएम एकसाथ, ५% बोनस र १००% हकप्रद पारित गर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले दुुईवटा आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक साधारणसभा(एजीएम) एकसाथ आह्वान गरेको छ । यो बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ र ०७२/७३ का लागि ६७ र ६८ औं वार्षिक साधारणसभा एकसाथ आगामी भदौ ३० गते आह्वान गरेको हो । काठमाण्डौको कमलपोखरीस्थित रुसी विज्ञान तथा सांस्कृतिक केन्द्रमा दुवै साधारणसभा एकसाथ...
फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्सले बोलायो साधारणसभा, १५ % बोनस र ५० % हकप्रदको प्रस्ताव पारित हुने
काठमाण्डौ । फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्सले आगामी असोज ८ गते कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । भदौ १६ गते बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले असोज ८ गते बिहान ११ बजे काठमाण्डौको भाटभटेनीस्थित आम्रपाली ब्यांक्वेटमा साधारणसभा बोलाएको हो । वार्षिक साधारणसभामा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर...